ဂဟေဆော်ပြီးနောက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး welded mesh Panel ကို-Hot-Dip - တရုတ် Hebei Samsung ကသတ္တုဝါယာကြိုးကွက်
ဂဟေဆော်ပြီးနောက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး welded mesh Panel ကို-Hot-Dip
hot-Dip အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဂဟေဝါယာကြိုးကွက်ပူသို့ကျဆင်းလာအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်အရည်အသွေးမြင့်-ဝါယာကြိုးများနှင့်ရေပူသို့ကျဆင်းလာ galvanized.it ချေးကာကွယ်ပေးဘို့ကပို သာ. ကောင်း၏ထားခြင်းဖြစ်သည်။ characters: ခိုင်မာတဲ့ဂဟေအချက်များနှင့်တောက်ပတောက်ပအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဖြတ်သို့မဟုတ်ယေဘုယျသံဝါယာကြိုးနှင့်အတူ .Compared အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အင်အားသုံးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ခံရလျှင်ပင်, ထုတ်ကုန် Anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးနဲ့ anti-သံချေး၏အရိုအသေအတွက်ပိုကောင်းများမှာချောင်လာ doesnt mesh သဖြင့်။ အသုံးပြုမှု: သူတို့ကကျယ်ပြန့်စက်အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေး, ဆောက်လုပ်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးစကားလုံး၏အတွက်အသုံးပြုကြသည် ...
hot-Dip သွပ်ရည်စိမ်ဂဟေဝါယာကြိုးကွက် ပူသို့ကျဆင်းလာအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်အရည်အသွေးမြင့်-ဝါယာကြိုးများနှင့်ရေပူသို့ကျဆင်းလာ galvanized.it ချေးကာကွယ်ပေးဘို့ကပို သာ. ကောင်း၏ထားခြင်းဖြစ်သည်။
characters: ခိုင်မာတဲ့ဂဟေအချက်များနှင့်တောက်ပတောက်ပအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဖြတ်သို့မဟုတ်ယေဘုယျသံဝါယာကြိုးနှင့်အတူ .Compared အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အင်အားသုံးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ခံရလျှင်ပင်, ထုတ်ကုန် Anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးနဲ့ anti-သံချေး၏အရိုအသေအတွက်ပိုကောင်းများမှာချောင်လာ doesnt mesh သဖြင့်။
အသုံးပြုမှု: သူတို့ကကျယ်ပြန့်စက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖုံးအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေး, ဆောက်လုပ်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးစကားလုံး၏အတွက်အသုံးပြုကြသည်, မွေးမြူရေးခြံအကာအရံ, ဥယျာဉ်ကိုခြံစည်းရိုး, etc ဝင်းဒိုးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကာအရံ, ကျမ်းပိုဒ်အကာအရံ, ငှက်လှောင်အိမ်, ကြက်ဥခြင်းတောင်း, စားသောက်ကုန်များကိုခြင်းတောင်း,
Size ကို mesh
1,07 - 0,64
1.65 - 0,71
1.65 - 0,81
2,11 - 0,81
2,11 - 1,07
2,11 - 1.47
2,77 - 1.65
305 မှ 50,8
ယခင်: Staninless သံမဏိဂဟေ mesh Panel ကို
နောက်တစ်ခု: hot-Dip အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဂဟေ mesh Panel ကို
2x2 အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဂဟေဝါယာကြိုးကွက် Panel ကို
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဂဟေဝါယာကြိုးကွက် Panel များ
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဂဟေဝါယာကြိုးကွက် Panel ကို
mesh Panel ကိုအားဖြည့်
ဖြောင့် & ဖြတ်ကြေးနန်း